Candid, Ukhululekile, Kufuphi nekhampasi
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAllison
Sebenza okanye udlale, le ndawo yokuhlala intle inayo yonke into oyifunayo ukuze ukonwabele ukuhlala kwakho! Asikuphela nje esi sithuba simemayo sikulungele ukukuvumela ukuba uhlale ngasemva kwibhedi yerhanisi, uphumle kwibhafu eshushu, kwaye uphumle kwibhafu ye-claw foot.... isicwangciso somgangatho ovulekileyo, iisilingi eziphezulu, kunye nenkqubo yesandi sendlu yonke. yenza indawo yakho efanelekileyo yokonwabisa!
Onke amagumbi okulala amathathu, amagumbi okuhlambela ayi-2.5, zombini iindawo ezingaphandle, ikhitshi, igumbi lokuhlamba impahla, kwaye ngokuqinisekileyo indawo yokuhlala/yokutyela yamkelekile kwiindwendwe.
Ibhedi enkulu eyi-1, 2 iibhedi ezilala abantu ababini, ibhedi ekhwele kwenye eyi-1, iisofa eziyi-2, oomatrasi abampontshwayo abayi- 2
Indawo yokuhlala yosapho enesikolo samabanga aphantsi / ipaki yoluntu engaphantsi kwekhilomitha. Ilizwe laseChico kunye nendawo ephakathi kwedolophu yi-5 min drive. Iziko lonyango le-Enloe liyi-3 min drive.
Ukuba kukho nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo, ndiyafumaneka ngomnxeba kwaye ndiyakwazi ukuma, ngaphakathi kwazo zonke iiyure ezifanelekileyo zosuku.